Afar ka mid ah xiddigaha muhiimka ah ee Real Madrid oo Florentino Perez u sheegay inay kooxda ka tagi doonaan haddii uu yimaado Jose Mourinho! – Gool FM
Afar ka mid ah xiddigaha muhiimka ah ee Real Madrid oo Florentino Perez u sheegay inay kooxda ka tagi doonaan haddii uu yimaado Jose Mourinho!
Haaruun March 11, 2019
(Madrid) 11 March 2019. Sida wararku ay sheegayaan afar ka mid ah xiddigaha muhiimka ah ee kooxda Real Madrid ayaa u sheegay madaxweynaha naadiga ee Perez inay ka tagi doonaan Los Blancos haddii Jose Mourinho loo dhiibo xilka tababarennimo ee kooxda.
Afartaan laacib oo ka mid ah kuwa ugu waa weyn Real Madrid ayaa la sheegayaa inay si aan gambasho lahayn ugu sheegeen Madaxweyne Florentino Perez inay isaga tagi doonaan kooxda haddii uu dib naadiga ugu soo celiyo macallinka reer Portugal ee Jose Mourinho.
Kooxda Real Madrid ayaa ku jirta xaalad jaho-wareer ah kaddib markii todobaad gudihiis laga soo wada reebay tartammada Champions League iyo Copa Del Rey, waxaana sidoo kale ay 12-dhibcood ka dambeysaa naadiga hoggaanka u haysa horyaalka La Ligaha Spain ee Barcelona.
Taasi waxa ay ka dhigan tahay in Madaxweyne Perez uu baadi goob ugu jiro macallinkii bedeli lahaa Santiago Solari oo lagu wado in kooxda laga cayrin doono, waxaana maalmihii dhowaa la hadal hayey in xilka tababarennimo ee kooxda loo dhiibi doono macallinkii hore ee Man United Jose Mourinho.
Yeelkeede, Wargeyska Daily Mail ee ka soo baxa Ingiriiska ayaa daabacay in afar ka mid ah xiddigaha ugu muhiimsan Real Madrid ay isaga dhaqaaqi doonaan kooxda haddii dib loogu soo celiyo naadiga macallin Jose Mourinho.
Waxa uu Wargeysku qormadiisa ku daray in afartaan ciyaartoy oo uu xusay magacyadooda ay Madaxweyne Florentino Perez ku wargeliyeen inaysan raali ka noqon doonin in maallinka reer Portugal uu ku soo laabto Los Blancos.
Afartaan ciyaartoy ee ku hanjabay inay dibadda uga bixi doonaan kooxda Real Madrid haddii uu yimaado macallin Jose Mourinho ayuu Wargeysku sheegay inay kala yihiin Sergio Ramos, Gareth Bale, Karim Benzema iyo Marcelo.
Wargeysku waxa uu qormadiisa ku xusay in Madaxweyne Perez uu u sheegay xiddigahan in cabashadooda iyo walaacoodu uusan wax saamayn ah ku yeelan doonin go’aankiisa iyo cidda uu u magacaabayo xilka tababarennimo ee kooxda, taasoo ka dhigan inay filan karaan macallinka ay kasii cabaadayaan ee Special one.
Kylian Mbappe oo ka hadlay haddii uu dhammaadka xilli ciyaareedkan ka tagayo kooxda Paris Saint-Germain
Kooxda Man United oo dib ugu soo laabtay Magaalada Manchester kaddib guuldarradii ka soo gaartay Arsenal.. + SAWIRRO